StoryZ ဓာတ်ပုံကို Motion & ဗီဒီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » StoryZ ဓာတ်ပုံကို Motion & ဗီဒီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
StoryZ ဓာတ်ပုံကို Motion & ဗီဒီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို APK ကို
StoryZ ဓာတ်ပုံရွေ့လျားမှု: နေဆဲပုံရိပ်တွေကနေအမြင်အာရုံပုံပြင်များကိုဖန်တီးပါ။
သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုရွှေ့ Make နှင့်အသက်ထံသို့လာကြ၏။
ငြိမ်ပုံရိပ်နှင့်ပြသမှုဗီဒီယိုပေါင်းစပ်နှင့်အတူကာတွန်းနှစ်ချက် Exposure Effect ဖန်တီးပါ။
Storyz ဓာတ်ပုံကိုရွေ့လျားမှုအနုပညာဖန်တီးဝေမျှဖို့ထူးခြားတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူ-friendly နဲ့ရိုးရိုး tools များနှင့်အတူဘဝကိုရန်သင့်ဓာတ်ပုံတွေယူလာပါ။ အရင်ကဆိုရင်အဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အညီအမျှသင့်လျော်သောတစ်ဦးကဓာတ်ပုံကာတွန်း suite ကို။ တစ်ဦးဦးဆောင်ဓာတ်ပုံအသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နှင့်အခြားအနုပညာရှင်များကနေလှုံ့ဆော်မှုရရှိမယ့်အခွင့်အလမ်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
cinemagraph နှစ်ချက်ထိတွေ့လာ GIFs သို့မဟုတ်မှော်ရွေ့လျားနေသည့်ပုံတူများကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပါ။
ဒါဟာကာတွန်း GIF ကိုနှင့် Animated နှစ်ချက် Exposure သို့သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးနေဆဲပုံရိပ်ထဲကတစ်ခု Animated ဗီဒီယိုစေနဲ့အံ့သြဖွယ်ကာတွန်းဆိုးကျိုးများရရှိနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုရွှေ့ Make နှင့်အသက်ထံသို့ လာ. အံ့သြဖွယ်ဒီဂျစ်တယ်အနုပညာစေ!
StoryZ app ကို tools များအသုံးပြုခြင်းဓါတ်ပုံတွေအပေါ်ရွေ့လျားမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု. ကာတွန်းပုံရိပ်ယောင်သို့နေဆဲပုံရိပ်တွေပါစေ။
•ဗီဒီယို, အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ထပ်ထောက်ခံမှုအကွိမျမြားစှာအလွှာ။
•ကြီးမားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု Store မှသင်အကြိုက်ဆုံးပြသမှုကိုရွေးချယ်ပါ။
•ဗီဒီယို Overlay ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုသင်အကြိုက်ဆုံးဓါတ်ပုံ & ဗီဒီယိုများတည်းဖြတ်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောဗီဒီယိုကိုပြသမှုသက်ရောက်မှုများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သင်တစ်ဦးနေဆဲပုံရိပ်ထဲကတစ်ခု Animated ဗီဒီယိုစေနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်သည်။
အံ့သြဖွယ် cinemagraphs ဖန်တီးဗီဒီယိုပြသမှုနှင့်အတူနေဆဲပုံရိပ်ပေါင်းမည်။
ပြသမှုဗီဒီယို, cinemagraph နှစ်ချက်ထိတွေ့ GIFs သို့မဟုတ်မှော်ရွေ့လျားပုံတူများကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုဖန်တီးဗီဒီယိုရွေ့လျားမှုနှင့်အတူဓာတ်ပုံကိုပေါင်းစည်း။
ဖြစ်ရပ်များ: တစ်မျိုးဖြစ်ရပ်ထောင့်တစ်ခုမှာသင်၏ခြေပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်ဖို့အပတ်စဉ်စိန်ခေါ်မှုများပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ StoryZ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရှာ!
Featured: Selected entry ကိုအိမ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်နေ့စဉ် featured ဖြစ်ပါတယ်။ ဝှက်ထားသောအနုပညာရှင်ထွက်ယူခဲ့!
High Definition: high resolution ကတော့အတွက်ဗီဒီယိုများ, Create ကယ်တင်မျှဝေ။
စာကြမ်းများ: အနာဂတ်အသုံးပြုရန်ဂယက်ထဲမှာမျိုးစုံမူကြမ်း Save ။
ဂယက်ထ Storyz ဖန်တီးရန်ကဘယ်လို:
ခ။ motion အချက်: သင်၏ရုပ်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှရွေ့လျားမှုပေးဖို့အဆိုကိုအချက်များ / မြှားထည့်ပါ။ Arrowhead ရွေ့လျားမှု၏ညှနျကွားဆုံးဖြတ်သည်။
က c ။ motion စီးရီး: motion စီးရီးသင့်ရဲ့ရုပ်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှဆက်တိုက်ရွေ့လျားမှုပေးဖို့အညီအမျှအရွယ်အစားရွေ့လျားမှုအချက်များကိုတစ် sequence ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ feature ဟာ sequence ကိုတစ်ခုလုံးကိုအရှည်ဖို့အဆိုကိုထပ်ပြောသည်။
ဃ။ stabilization အချက်များကို: ပြောင်းလဲနေသောအချက်သို့မဟုတ်စီးရီး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ရွေ့လျားမှသင်၏ရုပ်ပုံလွှာတစ်ဦးသောအဘို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့တည်ငြိမ်အချက်များထည့်ပါ။
အီး။ stabilization စီးရီး: stabilization စီးရီးညီတူညီမျှလှပတဲ့တည်ငြိမ်မှတ်တဲ့ sequence ကိုဖြစ်ပါတယ်။
f ။ ဖျက်ရန်: သူတို့ကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ဒိုင်းနမစ်သို့မဟုတ်တည်ငြိမ်မှတ် / စီးရီးကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့လက်ချောင်းပွတ်ဆွဲပါ။
ဆ။ မျက်နှာဖုံး: အသုံးပြုမှုကိုသင် image ကိုရွှေ့ချင်ကြဘူးရှိရာဒေသမှာ mask ။ ဒါကကို manual ဖြီး / Erase ကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ဇ။ သင့်ရဲ့ရုပ်ပုံ StoryZ ကြည့်ဖို့ Play ကိုထိပုတ်ပါ။
Motion Storyz ဖန်တီးရန်ကဘယ်လို:
က c ။ ရုပ်ပုံနှင့်အတူဗွီဒီယိုကိုရောနှောနေခြင်းမှမှော်သို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်ဖြီးကိုသုံးပါ။
ဃ။ Play သာပုတ်ပါ။
STORYZ Premium SUBSCRIPTION:
- သင် StoryZ app ကိုအတွင်းအားလုံး features တွေလုပ်ဖို့န့်အသတ် access များအတွက် StoryZ ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းစာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။
- Subscriptions စာရင်းသွင်းထားသောအစီအစဉ်ပေါ် မူတည်. ရွေးချယ်ထားသည့်နှုန်းမှာနှစ်စဉ်, လစဉ်ငွေကောက်ခံနေကြသည်။
- ကြိုတင်လက်ရှိကာလ၏အဆုံးမှကြိုတင် 24-နာရီဖျက်သိမ်းမဟုတ်လျှင် Subscriptions ရွေးကောက်တော်မူသောအထုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ Auto-သက်တမ်းတိုးဖို့။
- သင့် subscription ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဝယ်ယူပြီးနောက်သင့်ရဲ့ Account Settings ကိုသွားအားဖြင့် Auto-သက်တမ်းတိုးကို turn off လိမ့်မည်။
- အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: https://www.storyzapp.com/terms_and_condition.html
- ကိုယ်ပိုင်ရေးရာမူဝါဒ: https://www.storyzapp.com/privacy_policy.html
ဆိုးကျိုးများ: ကနေရှေးခယျြဖို့ကာတွန်းသက်ရောက်မှုတစ်ခုအကွာအဝေး။ ပုံရိပ်, ဗီဒီယို, စာသား, နှင့် lifelike စီမံကိန်းများကိုကိုဖန်တီးရန်ထပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအလွှာအပေါ်မျိုးစုံကာတွန်းသက်ရောက်မှု Apply ။
အမျိုးမျိုးသောစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်မှုများနှင့် UI ကိုတိုးတက်မှု။
StoryZ ဓာတ်ပုံကို Motion & ဗီဒီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
21.56 ကို MB
AndOr ဆက်သွယ်ရေး Pvt Ltd မှ
Pixaloop Enlight …
Movepic - ဓာတ်ပုံ ...
all-in-One ကိုဗီဒီယို ...
Video Editor: ...
လွယ်ကူသောဗီဒီယို Cutter ...